Madaxwayne Sheekh Shariif oo u dhoofay Ciraaq, kana qaybgeli doona shirka Jaamacadda Carabta ee ka furmaya Baqdaad – Radio Daljir
Madaxwayne Sheekh Shariif oo u dhoofay Ciraaq, kana qaybgeli doona shirka Jaamacadda Carabta ee ka furmaya Baqdaad
Mogadishu, Mar 28 -Madaxwaynaha dowladda faderaalka KMG ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wefdi ka tirsan golayaasha dowladda oo ka kooban baarlamaanka iyo golaha xukuumadda ayaa maanta kadhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Madaxwaynaha ayaa la filayaa inuu ka qaybgalo shirka dalalka ku bahooday ururka Jaamacadda Carabta oo la filayo maalinta Khamiista ah ee beri inuu ka furmo magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq.
Ajandayaasha Shirka Jaamacadda Carabta ee furmaya Khamiista.
Wasiirad dhaqaalaha ee jaamacadda carabta ayaa ka hor shir-madaxeedka hogaamiyayaasha carabta ku heshiiyey hindisayaal ku baaqaya in la iska kaashado dhinacyada dalxiiska,gabaabsiga biyaha iyo masiibooyinka dabiiciga ah ,waxana arrimahaasi lagu wadaa inay qalinka ku duugaan madaxda carabta maalinta khamiista ah ee berito.
Dhibaato biyo la?aan ah ayaa ka taagan dunida carabta , waxana marka la eego dalka Ciraaq qalalaya webiyada Dijla iyo Furaat , halka dowladda Imaaraadka Carabtuna ay sheegayso in biyaheeda ku jira dhulka hoostiisa ay qalalidoonaan muddo 50 sano gudahood ah.
Dalka Urdun ama Jordan ayaa laftigiisa waxaa haysta dhibaato dhinaca biyaha ah, iyadoo ay qalalayso badda Dead Sea ama Baxrul Mayit .
Dhicitaankii nidaamkii hore ee dalka Libya ee uu madaxda ka ahaa Col Mucamarl Al-Gaddafi ayaa sababay in uu istaago mashruuc ku kacayey $25billion oo dollar oo biyo lagu gaadhsiiinayey waqooyiga dalkaasi Libya.
Warbixin ay asbuucii hore soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in 10-ka sano ee soo socda ay biyo yaraantu keenidoonto dagaal dhinaca helitaanka biyaha ah.
Warbixinta dhinaca biyaha ah ee dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in biyuhu ay noqon doonaan aalad loo adeegsado dhinaca dagaalka gaar ah bariga dhexe iyo waqooyiga Africa.
Marka laga tago biyaha shirka jaamacadda Carabta ayaa laga hadlayaa kor u qaadida iskaashiga dalalka Carabta , arrinta dalka Suuriya,iyadoo xoghayahii hore ee qaramada midoobey immikana ah ergeyga qaramada midoobey iyo jaamacadda carabta ee dalka Suuriya Kofi Annan uu ka qaybgelayo shirka jaamacadda Carabta ee ka socda dalka Ciraaq, halkaasi oo uu gaadhayo maalinta Khamiista ah.
Ammaanka magaalada Baqdaad ayaa ayaa guud ahaan la adkeeyey , waxana jidadka la dhigay ciidamo aad u tira badan.
Ururka Al-qaacidda ayaa ku hanjbay in uu qaadayo weeraro ka dhan ah shir-madaxeedka Carabta si uu u muujiyo in ammaanka dalka Ciraaq uu jilicsanyahay.